ဣဿာ နှင့် မစ္ဆရိယ	Posted on October 17, 2009	by mettayate စိတ်ဆင်းရဲခြင်း အကြောင်းခြင်း
သူတစ်ပါးက မိမိထက်သာတာကိုမြင်ရလို့ ၀မ်းသာလိုက်ရင် မုဒိတာ ခေါ်တဲ့ ကုသိုလ် ဖြစ်တယ်။ မနာလိုလိုက်ရင် ဣဿာ လို့ခေါ်တဲ့ အကုသိုလ် ဖြစ်တယ်။
၁) အာဝါသ မစ္ဆရိယ – မိမိပိုင်ဆိုင်ရာနေရာဌာန၌ မိမိမှတစ်ပါး မည်သူ့ကိုမျှ မနေစေလိုခြင်း မိမိရနေသော အဆောက်အဦးကောင်းမျိုးကို သူတစ်ပါးမရစေလိုခြင်း။ သေသောအခါ ပြိတ္တာ၊ ဘီးလူး သော်လည်းကောင်း၊ လောဟကုမ္ဘီငရဲ ကျရတတ်သည်။
၂) ကုလ မစ္ဆရိယ – ရဟန်းဖြစ်လျှင် မိမိကို ကိုးကွယ်နေသော ဒကာ၊ ဒကာမများ အခြားရဟန်းကို မကိုးကွယ်စေလိုခြင်း၊ လူဖြစ်လျှင် မိမိဆွေမျိုး မိတ်သင်္ဂဟများက မိမိထက် အခြားသူများအား ပိုမိုချစ်ခင်သွားမည်ကို မလိုလားခြင်း။ ယခုဘ၀မှာပင် ပွက်ပွက်ဆူသောသွေးများ အန်ရတတ်ပြီး ဖြစ်လေရာဘ၀တွင် ပစ္စည်းလေးပါးလာဘ်လာဘ ပါးရှားတတ်သည်။
“၀န်တို” ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားနှစ်လုံးမှာ “၀န်”ဆိုတာ သူတစ်ပါးကြီးပွားချမ်းသာတာကို ၀မ်းမြောက်ရမည့်တာဝန်ဖြစ်တယ်။ လူတွေမှာ တာဝန်အသီးသီးရှိကြရာတွင် ကိုယ့်ထက်သာလွန်သူကို အမှန်တကယ် ကျေနပ်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ရမည့်တာဝန်တစ်ခုလည်း ရှိနေပါသည်။ ဘာကြောင့် ဒီတာဝန်ရှိရတာတုန်းဆိုတော့ လောကမှာ တိရစ္ဆာန်တွေဟာ ကိုယ့်ထက်သာသူကို မနာလိုတတ်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ထက်သာမယ်ထင်တဲ့ ရင်သွေးငယ်ကိုလည်း ငယ်စဉ်ကပင်သတ်ပစ်ကြတယ်။
ဒါ့ကြောင့် “၀န်” ဆိုတာ သူတစ်ပါးကြီးပွားချမ်းသာတာကို ၀မ်းမြောက်ရမည့်တာဝန်လို့ ဆိုလိုတယ်။ “တို” ဆိုတာက တွန့်တိုတာကို ဆိုလိုတယ်။ ဒါ့ကြောင့် “ပုထုဇဉ်အများစုမှာ သူတစ်ပါး၏ဇီးစေ့လောက်ရှိသော မကောင်းကွက်လေးကိုကား ရှာရှာဖွေဖွေမြင်ပြီး မေးငေါ့မဲ့ရွဲ့ အပြစ်တင်တတ်သလောက် မြင့်မိုရ်တောင်လောက်ရှိသော သူတစ်ပါးကောင်းကွက်ကိုကား မျက်စေ့လျှန်းနေတတ်ကြတယ်။ ၀မ်းသာအားရချီးမွမ်းရန် ခက်ခဲနေတတ်ကြတယ်။“
အာဇီဝတို့က သူ့ကိုတွင်းနက်ထဲချပြီး သူ့ပခုံးပေါ်၌သစ်သားပြားများတင်ပေးကြသည်။ ထိုသစ်သားပြားပေါ်မှာ အာဇီဝတို့ကထိုင်ပြီး ဇမ္ဗု၏ဆံပင်ကို ထန်းစေ့မှုတ်ခြမ်းဖြင့်ကုန်အောင် နှုတ်ပစ်ကြသည်။ ပြီးမှ အာဇီဝလို ရဟန်းပြုပေးလိုက်သည်။ အကုသိုလ်ကံမကုန်သေးသောကြောင့် ထမင်းဟင်းကိုမစားဘဲ ၀စ္စကုဋီထဲမှ မစင်များကိုသာဆက်၍ စားနေခဲ့သည်။ အာဇီဝကများ သိသွားသောအခါ ကဲ့ရဲ့မှာကြောက်သောကြောင့် ဇမ္ဗုကိုကျောင်းမှ နှင်ထုတ်လိုက်သည်။ ဇမ္ဗုအား လူအများတို့ မစင်စွန့်ရာအနီးရှိ ကျောက်ဖျာကြီးပေါ်တွင် နေ့အခါတွင် လက်တစ်ဖက်က ကျောက်ဖျာကိုကိုင်လျက် ပါးစပ်ကိုဟ ခြေတစ်ဖက်ကို မြှောက်ထားပြီး ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ထိုင်နေသည်။ အသိဉာဏ်နည်းသူတို့မေးလာသောအခါ ငါသည် လေကိုသာစားသောက်၏။ ငါ၏အကျင့်သည် ပြင်းထန်လွန်းလှသဖြင့် ငါ၏ခြေနှစ်ဖက်စလုံးဖြင့်နင်းလိုက်လျှင် မြေကြီးကို တုန်လှုပ်၏။ ငါသည် ဘယ်သောအခါမှ ထိုင်ခြင်းအိပ်ခြင်းကို မပြု ဟု ၀ါကြွားပြောဆိုလေသည်။
ခွေးဘ၀ကသေသော်အခါ ကာသိတိုင်း ရွာတစ်ရွာတွင် ပဋိသန္ဓေနေ၏။ သူ ပဋိသန္ဓေနေသည်နှင့်တပြိုင်နက် တစ်အိမ်သာလုံး အလုပ်ရှာမရတော့ဘဲ ငတ်မွတ်ဆင်းရဲကုန်၏. သူ၏အမည်ကို မိတ္တ၀ိန္ဒက ဟု မှည့်၏။ သူအရွယ်ရောက်သောအခါ အိမ်မှနှင်ထုတ်လိုက်သည်နှင့် အိမ်မှစီးပွားရေး အဆင်ပြေသွားလေသည်။ မိတ္တ၀ိန္ဒကသည် ရွာမှထွက်လာပြီး ဗာရာဏသီပြည်သို့ရောက်၏။ သနားတတ်သော ဘုရားအလောင်း ဒိသာပါမောက္ခဆရာကြီးက ခေါ်ယူကျွေးမွေးထားသော်လည်း သူလက်ခံခဲ့သော ဣဿာမစ္ဆရိယမီးသည် သူ့ကိုသာမက သူနှင့်ဆက်စပ်သူဟူသမျှကို လောင်ကျွမ်း၏။ သူရောက်သည်နှင့် ဒိသာပါမောက္ခဆရာကြီးမှာ လာဘ်တိတ်သွား၏။ တနေ့သော် မိတ္တ၀ိန္ဒက ပညာသင်လူငယ်များနှင့် ရန်ဖြစ်ပြီး ထွက်ပြေးပြန်သည်။ ပစ္စန္တရာဇ်ရွာသို့ရောက်သော် ဆင်းရဲတစ်ယောက်နှင့် အိမ်ထောင်ကျရာ ကလေးနှစ်ယောက်ရ၏။ ထိုရွာသည် မိတ္တ၀ိန္ဒက ရောက်သောအခါမှစ၍ မီး (၇) ကြိမ်လောင်၏။ မင်းဒဏ် (၇)ကြိမ်သင့်၏။ ဆည်ကန်ပေါက်ကာ ရေ (၇)ကြိမ် မြှုပ်၏။ ရွာသားတွေက မိတ္တ၀ိန္ဒက မိသားစုကို ခဲဖြင့် ပစ်ပေါက်နှင်ထုတ်ကြ၏။ သူတို့ပြေးလားရင်း တောအုပ်တစ်အုပ်တွင် ဘီးလူးများနှင့်ရင်ဆိုင်ရ၏။ ဘီလူးများက မိန်းမနှင့် သားနှစ်ယောက်ကို ဖမ်းဆီးစားသောက်ကြ၏။ မိတ္တ၀ိန္ဒက လည်း ကိုယ်လွတ်ရုန်းရင်း ပင်လယ်ကူးသဘောင်္ပေါ်သို့ ဘုမသိ ဘမသိနှင့်လိုက်သွား၏။ သမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့ (၇)ရက်မြောက်သောနေ့တွင် သဘောင်္မှာ ရှေ့ဆက်မသွားဘဲရပ်နေတော့သည်။ မာလိန်မှူးသည် သူယုတ်မာအကုသိုလ်ကြီးသူပါလာသည်ကို သိ၍ မဲပေါက်ကာ သူယုတ်မာ ဟု ရေးထားသောမဲကို နှိုက်မိသူသည် ၀ါးတစ်စီးနှင့် သမုဒ္ဒရာထဲ ချထားခြင်းခံရသည်။ ထိုမဲကို မိတ္တ၀ိန္ဒက (၇)ကြိမ်တိုင်တိုင်နှိုက်မိသောကြောင့် ၀ါးတစ်စီးနှင့် သမုဒ္ဒရာထဲ အချခံရ၏။ သူ့ကို ချလိုက်တော့မှ သဘောင်္သည် လေးညျို့မှလွှတ်သောမျှားကဲ့သို့ အရှိန်နှင့်ပြေးလေတော့သည်။ မိတ္တ၀ိန္ဒကသည် ၀ါးတစ်စီးဖြင့် မျောနေရာမှ (၇) ရက်စံ၊ (၇) ရက်ခံ သော ဝေမာနိကပြိတ္တာမလေးယောက်ရှိသော ဖလ်ဗိမာန်သို့ ရောက်သွား၏။ ထိုဝေမာနိကပြိတ္တာမလေးယောက်နှင့် နတ်စည်းစိမ်ကို (၇) ရက်စံစားရသည် ထိုသည်မှာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးဘ၀ကစောင့်ခဲ့သောသီလကုသိုလ်ကြောင့်ပင် ဖြစ်၏။ ပြိတ္တာမများ ငရဲသို့ (၇) ရက်ခံရန်ထွက်သွားသောအခါ မိတ္တ၀ိန္ဒကသည် မစောင့်နိုင်သဖြင့် ၀ါးစည်းဖြင့် သမုဒ္ဒရာအတွင်းဆက်၍ မျှောခဲ့ပြန်၏။ တခါ ဝေမာနိကပြိတ္တာမရှစ်ယောက်ရှိသော ငွေဗိမာန်သို့ရောက်ခဲ့ပြန်သည်။ ထို့အတူ ငရဲခံရန်ထွက်သွားသော ပြိတ္တာမများကို မစောင့်နိုင်ဘဲ ၀ါးစည်းဖြင့် ဆက်မျောပြန်သည်။ ပြိတ္တာမ (၁၆)ရှိသော ပတ္တမြားဗိမာန်၊ ပြိတ္တာမ (၃၁)ယောက်ရှိသော ရွှေဗိမာန်တို့တွင် (၇)ရက်စီ နတ်စည်းစိမ်ခံစားပြီး ဆက်မျောပြန်ရာ ဘီလူးမတစ်ယောက်မြို့ပြု၍နေသော ကျွန်းတစ်ကျွန်းသို့ရောက်သွား၏။ ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသော မိတ္တ၀ိန္ဒကသည် ဆိတ်မဖန်ဆင်းထားသော ဘီလူးမကိုတွေ့ကာ သတ်ဖြတ်ထားမည်ဟူသောစိတ်ဖြင့် ဆိတ်မခြေထောက်ကိုကိုင်လိုက်တာ ဘီလူးမသည် ချက်ချင်းဘီလူးမအသွင်ကို ပြန်ယူပြီးလျှင် မိတ္တ၀ိန္ဒက၏ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုကိုင်ကာ အားကုန်လွှဲပစ်လိုက်လေသည်။ မိတ္တ၀ိန္ဒက၏ကိုယ်သည်လည်း သမုဒ္ဒရာကျော်ပြီး ဗာရဏသီမင်းကြီး၏ဥယျာဉ်အတွင်းရှိ ခြုံပုတ်ကြီးတစ်ခုအပေါ်သို့ကျသွား၏။ ထိုအချိန်တွင် ဆိတ်များ မကြာခဏပျောက်သဖြင့် ဆိတ်ကျောင်းသားများက ဆိတ်သူခိုးကိုဖမ်းရန် စောင့်နေကြလေသည်။ ကံဆိုးသောမိတ္တ၀ိန္ဒက ဆိတ်များကိုမြင်သွားသောအခါ “ငါဟာ ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်က ဆိတ်တစ်ကောင်ခြေထောက်ကိုသွားဆွဲလိုက်လို့ ဆိတ်ကဘီလူးဖြစ်သွားပြီး ငါ့ခြေထောက်ကနေကိုင်ပစ်လိုက်တာ သမုဒ္ဒရာကိုကျော်ပြီး ဒီနေရာထိရောက်လာတယ်။ အခုလည်းဆိတ်တွေကို တွေ့ရပြန်ပြီ။ ဒီဆိတ်တစ်ကောင်ကောင်ရဲ့ခြေထောက်ကိုဆွဲလိုက်ရင် ဆိတ်ကဘီလူးဖြင်ပြီး ငါ့ခြေထောက်ကို ပြန်ကိုင်ပစ်လိုက်တာနဲ့ ငါပျော်ပါးခဲ့ဘူးတဲ့ ပြိတ္တာမတွေရဲ့ ပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်” လို့ တွေးပြီး ဆိတ်ခြေထောက်တစ်ကောင်ကို သွားကိုင်၏။ ဆိတ်ကား သူထင်သလိုဖြစ်မလာဘဲ တပဲပဲနှင့်အော်ကာ ရုန်းကန်းနေ၏။ ထိုအချိန်မှာ အသင့်စောင့်နေသောဆိတ်ကျောင်းသားတွေက ဆိတ်သူခိုးဟုထင်ပြီး ဘုရင်ထံပို့ရန်ဖမ်းယူလာလေသည်။ လမ်းတွင် ဒိသာပါမောက္ခဆရာကြီးနှင့်တွေ့ရာ ဆရာကြီး၏ပြောဆိုတောင်းပန်မှုကြောင့် မင်းဒဏ်မှ လွတ်ခဲ့ရ၏။
ထို့ကြောင့်ရွာသူကြီးက သူယုတ်မာတစ်ယောက်ယောက် အိမ်တစ်အိမ်တွင် ပဋိသန္ဓေနေပြီးဆိုသည်ကိုသိသဖြင့် အိမ်ခြေကို ငါးရာစီခွဲလိုက်၏။ ထိုသူငယ်မပါသော အိမ်ခြေငါးရာကား အဆင်ပြေသွားပြီး ထိုသူငယ်ပါနေသော အိမ်ခြေငါးရာကား ငတ်မွတ်မြဲ ဆက်လက်ငတ်မွတ်နေ၏။ ထို့နောက် ၂၅၀ စီထပ်ခွဲပြီး နောက်ဆုံးတွင် သူတို့မိသားစုတစ်အိမ်သာကျန်တော့သည်။ သူဖခင်သည်လည်း သည်းမခံနိုင်တော့ဘဲ ကိုယ်ဝန်အရင့်အမာကြီးနှင့် သူ့မိခင်ကို ပစ်ခွာသွားတော့၏။ သူ၏မိခင်သည် သူ့ကိုဆင်းရဲငြိုငြင်စွာမွေးဖွားပြီး လောသကတိဿဟု မှည့်၏။ သူ၏ဣဿမစ္ဆရိယမီးသည် သူ့မိခင်ကိုပါ ဆက်လောင်ပြန်၏။ သူ၏မိခင်သည် သူ့ကိုပွေ့ပြီးစားစရာတောင်းလိုက်လျှင် မည်သူမျှမပေးကြ။ ထိုကြောင့် မိခင်မှာ သူ့ကိုတစ်နေရာမှာ ခဏထားပြီးသွားတောင်းမှ စားစရာရ၏။ သူ (၇)နှစ်သားအရွယ်တွင် သူ့မိခင်သည်ကား သူ့ဒဏ်ကိုဆက်လက်မခံနိုင်တော့ဘဲ အိုးခြမ်းကွဲလေးတစ်ခုကို သူ့လက်ထဲထည့်ကာ ထွက်ပြေးရတော့၏။ လောသကတိဿသည် အိုးခြမ်းခွက်ကလေးကိုင်ကာ တစ်လမ်းဝင် တစ်လမ်းထွက် သာဝတ္ထိမြို့တစ်မြို့လုံး လှည့်လည်တောင်းရမ်းသော်လည်း စားစရာတစ်ဆုပ်ပင် ပေးမည့်သူမရှိ။ အိမ်ရှင်မများသည် ပန်ကန်းဆေးရေ အိုးဆေးရေများကို အိမ်ပေါက်ဝမှ လမ်းဘေးသို့ပက်ချသော်အခါ ရေမှပါလာသောထမင်းစေ့များသည် ဟိုတစ်စေ့ ဒီတစ်စေ့ပြန့်ကြဲနေတတ်၏။ သူသည် သဲလူးနေသော ထိုထမင်းလုံးများကို ကျီးတစ်ကောင်ကဲ့သို့ တစ်စေ့ချင်းကောက်၍စားရ၏။ ထိုအချိန်မှာပင် အရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့်တွေ့ပြီး ရှင်သာမဏေ၀တ်ခွင့်ရခဲ့၏။ ထိုအခါ တစ်ဆင့်ရဟန်းဖြစ့်ပြီးနောက်ကလအတန်ကြာမှာပင် ကိလေသာအာသဝေါကုန်ခမ်းသောရဟန္တာအဖြစ်သို့ရောက်သော်လည်း ၀ဋ်ကြွေးကားမကုန်ခန်းသေးပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရဟန္တာဖြစ်သည်အထိတိုင်အောင် ဆွမ်းတစ်နပ်မှ ၀အောင်မစားရခြင်းဖြစ်သည်။
အရှင်သာရိပုတ္တရာသည် သင်္ကန်းရုံ သပိတ်ပိုက်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်အလှူခံကြွရပြန်၏။ ဒီအခါကား အရပ်ထဲမကြွတော့ ကောသလမင်းကြီးနန်းတော်ထဲဝင် ရပ်ရတော့၏။ ကောသလမင်းကြီးသည် အရှင်သာရိပုတ္တရာကို ဖူးတွေ့ရသည်နှင့် သဒ္ဓါဖြစ်ကာ ဆွမ်းချိန်မဟုတ်သောကြောင့် စတုမဓူများကို သပိတ်အပြည့်လောင်းလှူလိုက်၏။ အရှင်သာ၇ိပုတ္တရာသည် ကျောင်းသို့မြန်မြန်ကြွကာ လောသကတိဿမထေရ်ထံ ရှေးရှုသွား၏။ အနားရောက်သည်နှင့် “လောသကတိဿ သင်၏၀ဋ်ကြွေးကားကြီးမားလှ၏။ သပိတ်ကို သင့်လက်ထဲထည့်လိုက်လျှင် စတုမဓူများပျောက်ချင်ပျောက်သွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ငါက သပိတ်ကိုပိုက်ထားမည်။ သင်အလိုရှိသလောက်ယူ၍ ဘုန်းပေးလေ” ဟုပြောကာ နောက်ဆုံးကျွေးမွေးတော်မူ၏။ လောသကတိဿမထေရ်သည် ရဟန္တာဖြစ်သည့်ဘ၀မှာပင် ထိုတစ်ကြိမ်သာ ၀၀လင်လင်ဘုဉ်းပေးပြီး ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံခဲ့ရ၏။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← စည်းစိမ်ဥစ္စာ အနှစ်ရှာ၊ ပြုပါ ဒါန